Hargeysa ma biyo la ee Biyo ayaanay isu ogolayn
W/Q Cabdirisaaq Tera
(Hadhwanaagnews) Tuesday, February 13, 2018 15:05:49
Dabayaaqadii Sanadkii 2014 ayaan ka hawl galay Shirkadda Khaliifa Foundation oo ahayd shirkadda Maalgelinaysay Biyo gelinta hargeysa, isla sannadkaasi waxaa soo idlaaday dhammaystirka Ceelashii biyaha hargeysa looga keeni lahaa oo ah deegaanka Xumbo weyne.
Waxaa Madaxweyne kuxigeenka Somaliland Ambasador Hutel ku daah-furay Mashruucaasi.
Shirkadda Khaliifa Foundation waxay iyana soo bandhigtay dariiqii biyahaasi hargeysa usoo mari lahaayeen iyo mudada biyahaasi hargeysa kusoo gaadhi doonaan.
Waxaa la bilaabay dhismaha Buustaradii gudaha hargeysa biyaha kala gaadhsiin lahaa.
Arrintu halkaas marka ay marayso ayaa waxaa bilaabmay Carqalad ka dhan ah biyahaasi oo isla reer hargeysa ah waxaa Beesha Madaxweynaha maanta Odayaashooda oo kashanaya wasiiro iyo Maareeyihii Wakaaladda biyaha ay keeneen in Biyaha dhinacooda lasoo
mariyo lagana duwo dariiqii ay soo mari lahaayeen.
Waxaad xasuusataan Odayga magaciisa layidhaahdo Muuse Dalab oo Cagaf-cagafyo ku qodaya dariiqii beel ahaan ay doonayeen in biyaha lasoo mariyo.
Calaa kuli xaal Madaxweyne Muuse xog-ogaal ayuu u yahay in reer hargeysa aan biyo la’aani haynin ee ay biyaha iyagu isu diidan yihiin siddaasi darteed amma ficiltanka qabaa’ilka ha raaco amma Caasimadda ha ka horqaado Bir-beelleeda biyaha hor taal.
Fiiro gaar ah: Caasimadda Hargeysa inay biyo hesho waxay qayb ka tahay dardaaran todoba magaalo oo Odaygii Imaaraatka Sheikh Saahid bin Nahyaan kula dardaarmay ubadkiisa.